Maraykanka oo Diiday codsi uga yimid Israel – Radio Daljir
Maraykanka oo Diiday codsi uga yimid Israel
Abriil 4, 2015 11:46 g 0
Sabti, Abriil 04, 2015 (Daljir) —Xukuumadda Washington ayaa gaashaanka ku dhufatay codsi kaga yimid Israa’iil oo ahaa in heshiiska ugu dambeeyay ee hubka Nuclear-ka Iiraan ay goobjoog ka noqoto, isla markaana iyaga looga haysto ogolaasho; iyagoo sheegay in codsigaasi uusan ahayn mid xilligan muhiim ah.
Afhayeenadda wasaaradda arrimaha dibadda Mareykank, Marie Harf oo ka jawaabaysay codsiga Israa’iil ayaa sheegtay in heshiiskan uu yahay oo keliya mid ku saabsan arrimaha Nuclear-ka oo aysan jirina waxyaaabo kale oo laga hadlayo.
“Heshiisakan waa mid ku saabsan oo keliya Nuclear-ka,” ayay tiri Harf oo u warramaysay warbaahinta. Iyadoo intaas ku dartay. “Mana ahan heshiiskan mid waxyaabo kale looga hadlayo.”
Tan iyo markii ay heshiiska hordhaca ah ka gaareen dalalka caalamka ugu quwadda weyn iyo Iiraan barnaamijka hubka Nuclear-ka ee Iiraan ayay madaxda Mareykanka oo uu ku jiro Obama waxay la hadleen xubno ka tirsan Yuhuudda oo u ololeynayay in mudnaan laga siiyo heshiiska hubka Nuclear-ka ee Iiraan.
“Madaxweynuhu ayaa arrintan shaqo weyn ka qabtay,” ayuu yiri xildhibaan Jeff Flake oo madax u ah guddiga arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamka ee Congress-ka Mareykanka. Isagoo intaas ku daray. “Sida iska cad, xubnaha Congress-ku waa ogyihiin in arrintan door muhiim ah laga ciyaaray, balse Israa’iil way aqbali la’dahay hadalka madaxda.”
Markii lagu dhawaaqay Talaadadii lasoo dhaafay in Iiraan iyo waddamada awoodda leh ee caalamka ay heshiis hordhac ah ka gaareen barnaamijka Nuclear-ka Iiraan lana dhameystiri doono 30-ka bisaha June ee sanadkan ayuu ra’iisul wasaaraha Israa\_’iil Benjamin Netanyahu sheegay in isaga iyo xukuumaddiisu ay aragti mid ah ka qaateen heshiiskan oo ay kasoo horjeedaan.
Netanyahu ayaa sheegay in kulan ay golaha wasiirrada Israa’iil ay yeesheen Jimcihii shalay ay ku go’aansadeen inaysan heshiiskaas aqbalin, isagoo yiri. “Israa’iil marna ma ogolaan doonto heshiis ku saabsan in Iiraan loo ogolaado in ay kobciso hubkeeda Nuclear-ka.”
Sidoo kale, Netanyahu ayaa dalbaday in Israa’iil laga qayb-geliyo saaxiixa ugu dambeeya ee heshiiska barnaamijka Nuclear-ka Iran, isla markaana lagu daro qadobbada heshiiskaas in Iiraan ay aqoonsato jiritaanka dowladda Israa’iil.
Afhayeenka Aqalka Cad ee waddanka Mareykanka, Eric Schultz warbaahinta ugu sheegay Washington in barnaamijka Neclear-ka Iiraan howl badan laga soo qabtay, uuna aad ugu kalsoon yahay in heshiis kama dambeys ah laga gaaro dhawaan.
Ugu dambeyn, madaxweyne Obama ayaa u sheegay Netanyahu in la kordhin doono wada-tashiyada la xiriira xoojinta muddada dheer ee amniga Israa’iil, isla markaana looga hor-tagayo hanjabaadaha ka imaaanaya Iiraan.
Al-Shabab oo la sheegay in ay doonayso kala qaybinta Kenya